I-Malware ukuthi uyosula ukusikrini FSX futhi FSXA
Idea I-Malware ukuthi uyosula ukusikrini FSX futhi FSXA
2 iminyaka 1 iviki eledlule #606 by archangelmj12
Im ukukwazisa ukuthi kunamabutho amabili amasethi abathwali izindiza out in the sim okulandwayo freeware ezizindeni ezihlukahlukene. Izinhlelo izosebenza ngendlela basuke ake sithi ukuba ngaphandle kokuthi unqume ukusula. Uma uya nge control panel imenyu khipha iwindi ngeke vela kanye nohlobo oluhlaza sukela Thru futhi uzophawula ukuthi yonke imininingwane amafayela ukusikrini uzobe ulahlekile. Ngabona lokhu okokuqala i waya khipha 2 edlule futhi ngibuka lesi sikrini nalapho i saw izindiza zami zonke 3500 efakwe ohlwini wesula i Ayikwazanga esithile ngiyakukholwa lokho. Ngathinta kusayithi futhi yenziwa sibabonise le futhi i okwakwenqatshelwe kusayithi. Ngazi kahle eqinisweni It Wasnt umklami noma program ngoba ive esetshenziswa imikhiqizo yabo kulo esikhathini esiyiminyaka 10. Ive wazama okufanayo 2 abathwali isikhathi esiyiminyaka emithathu futhi ive ihlolwe amafayela umnyango lwezinhlelo ukuzivikela futhi kukhona i-malware okuthiwa sniperspy futhi abangaziwa ngalesi sikhathi idatha okuyimfihlakalo. Sniperspy indlela lapho ukubeka spyware kuphi futhi okwamanje bawo bafinyelela kwenza ukuxhumana umthumeli futhi kubonisa izenzo zakho bukhoma futhi esikhathini esidlule kanye yonke imininingwane ukusikrini okufaka idatha okuyimfihlakalo kufihlwe. Im ukukwazisa ngoba sike zonke wachitha isakhiwo isikhathi eside kangaka, futhi lokhu ku uqalwe (emayini 2007. Sike zonke kwaba ngokusebenzisa ekhishwa wokwenza uhlelo lokho sasihloselwe ukuba futhi egula njalo wenze umzamo ukuvumela umphakathi ukwazi ivikela futhi. Its ngidabukile ngenxa mikhiqizo esithile kukhona okungcono kakhulu sim kuze kufike abathwali uhambe. ive wenza umzamo ukuxhumana umdali kodwa akusizanga. yiba indiza ephephile futhi uqaphele futhi ibe ephephile, bese ubuka okulandwayo iyeza aphume ezindaweni sezinkathazo emhlabeni. Im kuphela omunye izigidi kanye sobudala ukuthi utholakale eshaywe waze ngokusebenzisa Yahoo futhi iyagula ukutshela ya i sengathi bonke kule nhlekelele emhlabeni wonke kuyoyeka. Rikoooo, siyabonga ukuhlinzeka sonke nge yindawo enhle hamba umphakathi inika &% # @? !!!! .
iminyaka 2 6 izinsuku ezedlule #607 by Gh0stRider203
Empeleni, sniperspy kuyinto isofthiwe akude ukuqapha lokho ngaphandle yini enye.
Uthole lutho isipele lezi izimangalo?
iminyaka 2 5 izinsuku ezedlule #610 by archangelmj12
Okufanele ukwenze nje ukuya website futhi ukufunda idatha Thats izimpahla ngohlelo, layo kwaba inthanethi kahle phezu 15 iminyaka, uhlelo yayo esetshenziswa izinhlangano eziningi, abanye ngisho umthetho. Thats kungani i ethuma isixwayiso, kodwa uma kukhona ukungabaza ukulanda edume kunazo yenethiwekhi onlineline, njengoba i ayeshilo ngaphambili, zayo yonke amakhophi, futhi i dont ukuthi ikhona enye kuka uhlelo i ecacisiwe kahle spy. Ngacabanga ukuthi kungaba ngcono ukuba uqaphele abantu Thru nakho kunokuba abantu bazibonele ngokwabo. Iqiniso thatsI yizwa ngami Thats kungani i ngokuvamile uyeke ukubhuloga noma yasho lutho. Lapho i am esamnika ukufakazela, i kufanele imikhiqizo igama senza umonakalo, kodwa kulokhu ngiyayazi Wasnt kwenziwa uMdali sokuqala uhlelo noma izinhlelo. Ngokucacile i wafuna abatshele ukuthi indawo ukuze singathwesi ukuxosha abantu. Im ngeke uthumele noma yini esizeni ukusikrini, njengoba indaba yokuthi ive kwaba esizeni ukusikrini kusukela ekuqaleni kwayo, nakuba im efakwe ohlwini njengelungu elisha. Ngajoyina e 2008 noma 2009. Ive wasebenza Microsoft aphume seattle futhi techs kwawo ezindabeni nezexwayiso hhayi kuphela MSFS kodwa lutho eyehlayo Thru uhlelo Microsoft futhi noma inethiwekhi Thats kwenzeka nje ukuba umsebenzi eyehlayo Thru 98 PCT we amakhompyutha imihlaba, futhi Thats ngoba lokho yayo enkulu inkinga ngoba esikhathini esiningi amakhompyutha imihlaba ukusebenzisa izinhlelo MS. Nuff wathi.
iminyaka 2 4 izinsuku ezedlule #612 by Kyrelel
Uma ufuna abantu yokugqashula okulandwayo othile, kungani usitshele ukuthi / bakuphi esikhundleni dalwa ngamabomu engaqondakali?
Isikhathi ukudala page: 0.321 imizuzwana